AirPlay mankany Mac dia mamela anao hizara atiny amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ity dia vaovao iray hafa mahaliana izay azo atao amin'ny kinova vaovao an'ny macOS Monterey rafitra fiasa. amin'ny «AirPlay mankany Mac» hanana safidy iray hafa ny mpampiasa hizara ny atiny avy amin'ny iPhone na avy amin'ny iPad mankany amin'ny Mac.
Matetika io safidy io dia azo avadika, izany hoe azonao atao Fizarana AirPlay fizarana amin'ny monitor ivelany na fahitalavitra Saingy tsy azo atao ny mizara ny efijery Mac avy amin'ny iPhone na iPad, ka amin'ity tranga ity dia ampian'i Apple ity fiasa ity hahafahanao manao azy.
Izany indrindra no azontsika atao amin'ity endri-javatra vaovao ity ao amin'ny macOS:
Miaraka amin'ny AirPlay mankany Mac, ny mpampiasa dia afaka milalao atiny, mampiseho ary mizara na inona na inona - sarimihetsika, lalao, sary fialantsasatra na tetik'asa - avy amin'ny iPhone na iPad azy ireo mba hahatonga azy ireo tsy ho toy ny teo amin'ny fampisehoana Retina mahatalanjona an'ny Mac. -ny rafi-peo ao amin'ny Mac-nao koa dia mandeha ho mpandahateny AirPlay, ahafahana mitendry mozika sy podcasts amin'ny Mac anao na mampiasa azy ho mpandahateny faharoa hampiasa audio multi-zone.
Azo antoka fa maro ireo mpampiasa no mankasitraka an'io asa io satria ny fananana iMac ho efijery ivelany dia mety hahaliana amin'ny lafiny maro, indrindra amin'ny tontolon'ny asa na koa rehefa mahita ny tenantsika tsy misy mpanara-maso ivelany na televiziona hanaovana an'io AirPlay io isika. Zava-baovao mahaliana izay ho avy amin'ny kinova macOS manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » AirPlay mankany Mac dia mamela ny fizarana atiny amin'ny Mac